Jadwalka Jadwalka Maarso ee Magaalada Seoul iyo Xarumaha | RayHaber
HomeDUNIDAAasiya82 Kuuriya (Koonfurta)Jadwalka Jadwalka Maarso ee Magaalada Seoul iyo Saldhigyo
26 / 11 / 2019 82 Kuuriya (Koonfurta), Aasiya, Khariidadaha
khariiddada korea metro
Jadwalka Jadwalka Khariidadda Seoul iyo Joojinta: Seoul waa caasimadda Kuuriyada Koonfureed waana magaalada ugu caansan waddanka. Qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha ayaa ku nool Seoul ama degmo aad ugu dhow Seoul. Tani waa qodob kor u qaadaya socodka dadka lugeeya iyo gaadiidka magaalada. In kasta oo ay dadweynahu qiyaastii yahay 25 milyan, waxaan isku dayi doonnaa in aan soo bandhigno macluumaadka ku saabsan jid-hoosaadka magaaladan, oo dhibaatadooda gaadiidku ku xalliso metro.
Metro ayaa si rasmi ah u billowday Agoosto 15 1974. Dhererka khadka 331,5 km'Dr. Si kastaba ha noqotee, marka dhammaan qadka magaalada gudaheeda la tixgeliyo, wadarta dhererka khadadka tareenka 1,097 kmilaa.
Khariidada Seoul Metro
Waxaa jira wadarta guud ee nidaamyada gaadiidka metro ee 21 gudaha xuduudaha Seoul. Khariidadda nidaamkan, oo ka kooban taraam, tareenka dhulka hoostiisa mara, tareenka dhulka hoostiisa ah iyo nawaaxigeeda, waa sida soo socota:
khariidadda metro map
Nidaamka dhulka hoostiisa mara ee Kuuriyada Koonfureed oo si aad ah u horumarsan ayaa u adeegta qiyaastii 3 bilyan oo rakaab ah sanadkiiba. Seoul Subway waa mid ka mid ah mitrooyinka ugu caansan ee loo yaqaan '10 metro' adduunka waxaana loo muujiyaa tusaale ahaan nidaamyada tareenka dhulka hoostiisa.
Bogga Rasmiga ee Rasmiga ah: http://www.seoulmetro.co.kr/ (Korean, English, Japanese, Chinese)
Saldhigyada Magaalada 'Seoul Metro Stations'
hat Route Tirada Saldhigyada Length (km)
1. line Soyos ah 114 200,6 km
2. line Guriga Magaalada - Seongsu - Sindorim 51 60,2 km
4. line Dangoga in 51 71,5 km
6. line waxaan Eunga 38 35,1 km
7. line waxaan Jangada 51 57,1 km
9. line Gaehw in 42 26,9 km
AREX Saldhigga Tareenka ee Seoul 13 58,0 km
Gyeongchun ah Sangbong 22 80,7 km
EverLink in Giheung 15 18,1 km
Xariiqda U Balgo 15 11,1 km
Madaarka Incheon iyo Wadada Iskuulka Hoose ee Magaalada
Magaalada waa 47 km oo gaadiid u socodka magaalada aad bey u fududahay. Waad iibsan kartaa tikid keliya si aad u tagto dhulka hoostiisa iyo baska, laakiin waa labadaba waqti lumis iyo qaalisan. Si aad u hesho kaar aad ugu faa iidaysan doona gaadiidka magaalada, waad aadi kartaa Incheon oo aad dhammeyn kartaa dhammaan nidaamka xakamaynta ee ay shaqeynayaan, ka degto hal dabaq oo ka bax meesha aadna gashay suuqa aad markii ugu horreysay aragtay.T-lacagIstem kaliya weydiiso kaarka.
Qiimaha Tigidhada Subway Subway
ISTICMAAL METRO KELIYA
[ajuurada dheeriga ah]
10 - 50 km: 5 KRW waxaa lagu darayaa midkasta 100 km
+ 50 km: 8 KRW waxaa lagu daraa midkasta 100 km
[Gudaha Seoul] 55,000 KRW (1,250KRW × 44th)
Marka laga reebo Khadadka Tareenka Diyaaradda, Khadadka Sinbundang, Khadadka Everline iyo U Line
Jadwalka Jiilaalka Havaist iyo Cimilada…